Ii kaalay, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland (WKG)
Gabadhayada saddaxda sano jirka ah Emory Grace waa mid cajiib ah oo wax barta si dhakhso ahna wax u barta, laakiin sida carruurta kale oo dhan, waxay ku adag tahay fahamka nafteeda. Markaan la hadlo, way isoo eegtaa waxayna isleekeentaa nafsadaada: Waxaan arkaa afkaaga oo dhaqdhaqaaqaaya, waxaan maqlaa ereyo, laakiin wax fikir ah kama haysto waxaad rabto inaad ii sheegto. Markaasaan gacmahayga furay oo waxaan ku idhi, ii kaalay! Waxay u ordaa si ay u hesho jacaylkeeda.
Tani waxay i xusuusineysaa markii aabaheed yaraa. Waxaa jiray waqtiyo uusan fahmin maxaa yeelay wuxuu ka maqnaa macluumaadka uu ubaahan yahay iyo, xaaladaha kale, si fudud uma uusan helin qibrad ama qaan gaarin inuu fahmo. Waxaan ku iri: Waa inaad igu aamintaa hadii kale waad fahmi doontaa goor dambe. Markii aan ku iri erayadan, Rabbigu had iyo goorba waan xusuustaa wixii Ilaah kaga hadlay nebi Isayos isagoo leh, Rabbigu wuxuu leeyahay, Fikirradaydu fikirradiinna ma aha, oo jidadkiinnuna jidadkayga ma aha, ayaa Rabbigu leeyahay. , si ay jidadkaygu jidadkaaga uga sarreeyaan, Oo ay fikirradayduna fikirradiinna uga sarreeyaan (Ishacyaah 55,8-9).
Ilaahay wuxuu ina xusuusinayaa inuu waxkasta gacanta ku hayo. Ma aha inaan fahamno dhammaan faahfaahinta murugsan, laakiin waxaan ku kalsoonaan karnaa inuu isagu yahay jacayl. Si buuxda uma fahmi karno nimcada Ilaah, naxariistiisa, cafiska guud, iyo jacaylka shuruud la’aan ah. Jacaylkiisu aad buu uga badan yahay jacayl kasta oo aan siin karo; waa shuruud la'aan. Taasi micnaheedu waa inaysan sinaba iigu tiirsanayn. Ilaah waa jacayl. Kaliya maahan inuu Eebbe jacayl leeyahay oo uu ku dhaqmo, laakiin waa jacayl shaqsiyeed. Naxariistiisa iyo cafinimadiisu waa wadarta - ma jiraan xadadyo - wuxuu tirtiray oo uu dembiyo ka fogeeyay illaa ay bari ka fog tahay galbeedku - waxna lama xasuusto. Sidee buu u sameeyaa Ma aqaan; Jidadkiisuu ka sarreeyaa jidadkayga, Oo isagaan isaga ku ammaani doonaa. Wuxuu si fudud inoogu sheegayaa inaan u nimaadno isaga.
Emory, ayeeyadeena waxaa laga yaabaa inaysan fahmin dhamaan ereyada afkayga ka soo baxa, laakiin si sax ah ayey u fahamtaa markaan gacmahayga furi doono. Way ogtahay in ayeeyada ay iyadu jeceshahay, in kasta oo aanan sharixi karin jaceylka aan u qabo maxaa yeelay markan fikirradeyda ayaa ka sarreeya kan maskaxdeedu ay garan karto. Isku mid ayaa ku quseeya Ilaah. Jacaylkiisa uu inoo qabo waxaa lagu muujiyey qaab ka fog fahamkeena.
Ma fahmi kartid wax walba oo ka dhigay Ciise aadanaha iyo macnaha buuxa ee noloshiisa, dhimashadiisa, iyo sarakicistiisa. Laakiin sida Emory, waad ogtahay waxa jacaylku yahay iyo waxa ay tahay markii Ciise gacmihiisa furay oo yidhi, Ii kaalay!
waxaa qoray Greg Williams